Etu esi eji ọnụahịa algorithmic mee ka uru bara ụba | Martech Zone
Friday, February 12, 2016 Friday, February 12, 2016 Douglas Karr
Dịka onye na-ere ahịa onwe gị, ebumnuche gị bụ ịbawanye uru na ngwaahịa ngwaahịa gị. Nye ọnụahịa bụ ihe kachasị mkpa iji metụta nnukwu uru gị - yabụ ọ chọrọ nlebara gị anya. Mana olee otu ị ga - esi mara nke ọma na ị naghị akwụ ọnụahịa ngwaahịa nke onwe gị dị oke ala?
Nwere ike ịhapụ ego na tebụl ịmaghị. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ị na-akwụ ụgwọ dị elu nke ukwuu ma ghara ịmepụta ọtụtụ ahịa dị ka ị nwere ike ịbụ. Ọ bụ ezie na akara onwe gị bụ n'ezie ụzọ ị ga-esi bulie azụmaahịa gị taa na-ere n'ịntanetị n'ịsọ asọmpi n'ịntanetị, ịnọ n'ihu asọmpi ahụ bụ isi ihe ga-eme ka ị nwee ọganiihu.
Ezubere azịza ọnụahịa nke aha nke Feedvisor ka emepụtara ya maka ndị na-ere akara onwe ya - dị ka gị. Anyị na-akpaghị aka na-amụta onwe algọridim ga-enyere gị jirichaa gị uru oke maka gị onwe labelụ ngwaahịa, n'ikpeazụ mee ngwangwa gị onwe labeelu azụmahịa ibu.
Kedu ihe kpatara ị jiri chọọ ọnụahịa algorithmic maka ngwaahịa nkeonwe gị
Uru kacha mma - won't gaghị echerịrị ọnụahịa gị ọzọ. Nkọwa ọnụahịa algorithmic na-ewepụ ihe ize ndụ nke ịhapụ ego na tebụl site na ịchọta ọnụahịa zuru oke iji hụ uru kacha mma maka ngwaahịa ọ bụla nke onwe gị.
Oge na-azoputa - Ikwesighi iji aka gi guzobe onu ahia gi. Ijikwa ọnụahịa maka ngwaahịa gị ọ bụla na-eri oge, ma nwee ike iweghara ọtụtụ ụbọchị nke ụbọchị gị. Ruo ugbu a, ọ nweghị ngwọta ọnụahịa adịla maka ngwaahịa akara nkeonwe. Anyị akpaghị aka ngwọta atọhapụ gị oge otú i nwere ike na-elekwasị anya replenishment, scouting na ndị ọzọ dị oké mkpa na-eme dị mkpa iji mee ngwangwa gị onwe labeelu azụmahịa ibu.
Njikwa na nkwụsi ike - have nwere ikike ịchịkwa ngwa ahịa gị na ahịa ya.
Na oghere ndị na-ere ahịa na-enweghị atụ - ị nwere njikwa zuru oke banyere ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa ịre ngwaahịa gị - dabere na ọnọdụ azụmahịa gị pụrụ iche.
Kedu otu ọnụahịa algorithmic si arụ ọrụ?
Enweghị mkpa itinye iwu ọ bụla ma ọ bụ chọpụta ngwaahịa ọ bụla. Ihe omuma nke onwe anyi nke oma n’enye gi aka n’enye gi ngwa ahia.
Can nwere ike ịtọpụta ụbọchị ị ga-ewepụ ma ọ bụ gwa anyị ọtụtụ ihe ịchọrọ ịre kwa ụbọchị.
Bọchị ezubere iche - Gwa anyị ụbọchị ebumnuche gị, ụbọchị algọridim anyị ga - akọwa ọnụahịa na ire ahịa kachasị mma nke ga - eme ka ị ree site n’ụbọchị ahụ.
[igbe ụdị = ”dee” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”]Ihe Nlereanya: Ọ bụrụ na ịnata ngwaahịa ọhụrụ n'aka onye nrụpụta gị na ọnwa nke ọnwa na - abịanụ ma chọọ ịchụpụ ngwaahịa gị ugbu a site na mgbe ahụ, mee ka anyị mara ụbọchị ọ bụla, anyị ga - agba mbọ hụ na edochapụrụ ngwaahịa gị kacha mma ego ga-ekwe omume, tupu ngwaahịa ọhụrụ abata. [/ igbe]
Ebumnuche site na ọsọ - Gbaa mbọ hụ na ị naghị ere ngwa ngwa ma ọ bụ jidesie ngwa ngwa na-aga ngwa ngwa. Gwa anyị ole ihe ị chọrọ ire kwa ụbọchị, ma hapụ ka algọridim anyị lekọta ndị ọzọ.
[igbe ụdị = ”dee” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”] Ihe Nlereanya: Ahịa ahịa ka elu na ị na-ere ihe karịa ka ị chọrọ zubere maka. Na ọnụego a, ị ga-ere n'ime otu izu mana ngwaahịa ọhụrụ gị na-abịarute izu abụọ. Gbochie ida ọkwa peeji gị site na ijide n'aka na ị gaghị ere ruo mgbe ị batara ọhụrụ. Jikwaa ọsọ nke ahịa gị site na ịgwa anyị ọtụtụ ihe ị ga-achọ ire kwa ụbọchị. [/ Igbe]
Ọzọ Uru Feedvisor Uru
Dị ka akụkụ nke Ngwunye ngwugwu njirimara Feedvisor, ị ga-enweta:
Anyị ụlọ ọrụ ọgụgụ isi azụmahịa - nke nwere dashboards kensinammuo, akụkọ miri emi na ịdọ aka na ntị kwa ụbọchị iji nyere gị aka ịme mkpebi azụmaahịa ziri ezi:
Dashboard awade ma a panoramic nnyocha na miri-amaba na mmiri, na-enye gị a ọgaranya analysis nke gị na-akwụ ụgwọ, ahịa, ngwaahịa udu na ahịa ọnọdụ.
Akụkọ anyị gosiputa otutu data ị nwere ike iberi ma dice dika uzo di iche iche, dika ahia ahia gi.
Ihe ngosi gosiputa ihe omuma di nkpa, dika mgbe ihe ndi ozo adighi aba uru, mgbe ihe ndi kachasi nma gi na agha, na mgbe i kwesiri iwepu ngwa ngwa.
A raara onwe ya nye onye njikwa ihe ịga nke ọma onye ga - eduzi gị na ịzụlite akara ngosi nzuzo gị. Ndi otu ndi ahia anyi na - emejuputa ndi okacha amara na ndi okacha amara nke Amazon - ya mere i gha enwe obi ike na ino n’aka nri.
Hụ ihe ndị na-eri nri nwere ike nweta maka azụmaahịa aha njirimara nke onwe gị Amazon!
Mee ngwangwa gị Amazon n'onwe Label Business
Tags: ịnye ọnụahịa algoọnụahịa algorithmiconye na-enye nri